पहल क्यू समीक्षा – अर्को ठूलो डिजिटल मुद्रा? | देखाउनुहोस् शीर्ष
पहल क्यू के हो?
पहल क्यू संसारको सबै भन्दा राम्रो भुक्तानी विधि सिर्जना गर्न खेलकुद एक परियोजना हो.
The difference between this and cryptocurrency projects is that Initiative Q hasastrategy of targeting early adopters. यो एक आमन्त्रण मात्र मोडेल सुरु गरेर गरेको अभियान सुरु भएको छ, र प्रारम्भिक adopters गर्न गुप्त को भारी मात्रा टाढा दिने सुरु भएको छ.
एक अधिकतम2ट्रिलियन सिक्का जारी गरिनेछ, र उद्देश्य एकल सिक्का लायक हुनेछ छ $1. धेरै cryptocurrencies संग मुख्य समस्या एक यो ग्रहण वा प्रयोगकर्ताहरूको कमी छ छ. पहल क्यू 1st उद्देश्य प्रयोगकर्ताहरूको एक महत्वपूर्ण आम सिर्जना गर्न र त्यसपछि संसारको सबै भन्दा राम्रो भुक्तानी विधि निर्माण छ.
पहल क्यू cryptocurrency प्रविधिको प्रयोग हुन सक्छ तर यो अझै निर्णय गर्न छ.
नवीनतम प्रविधिहरू प्रयोग, उद्देश्य राम्रो भुक्तानी विधि सिर्जना गर्न छ, कम शुल्क संग, छिटो भुक्तानी, प्रयोग गर्न सजिलो र ठगी मुक्त. एउटा अनुप्रयोग आफ्नो वस्तु स्क्यान र बाहिर हिंड्न प्रयोग, यो प्रयोग मा सजिलो आफ्नो विचार छ. ठगी औंठाछाप सेन्सर harnessing द्वारा रोकियो छ, जीपीएस, क्यामेरा र माइक्रोफोन. पहल क्यू पनि लेनदेन उल्ट्याउन गर्ने क्षमता चाहनुहुन्छ, which विटक्वाइन does not have. पहल क्यू पनि हो कि एउटा बैंक खाता खोल्न सक्षम मान्छे बाहिर पुग्नेछ.
यो लोकप्रिय छ?
तपाईं सामाजिक मिडियामा सक्रिय छन् भने तपाईंले पहिले नै पहल क्यू मार्फत आउन सक्छ. बस निम्न Google चलन ग्राफ जाँच. शब्द 'पहल क्यू’ शब्द 'Ethereum overtaken छ’ Google Trends मा.
पहल क्यू समीक्षा – अर्को ठूलो परियोजना
पनि, पहल क्यू बस तिनीहरूले भन्दा छ घोषणा गरेका छन्2लाख साइन अप. मई वरिपरि सामाजिक मिडियामा सक्रिय थियो कि एक कम्पनी को लागि खराब छैन 2018.
पहल क्यू गर्न साइन अप गर्न तपाईं कोही एक निमन्त्रणा छ. तिनीहरूले तपाईंलाई इमेल वा सामाजिक मिडिया मार्फत लिङ्क पठाउन र त्यसपछि तपाईं लिंक देखि साइन अप. साइनअप मा तपाईं गुप्त को Q4,945 प्राप्त.
यो एक पिरामिड योजना छ?
एक पिरामिड योजना, प्रारम्भिक एडोप्टर केही पैसा वा गुप्त निवेश, र त्यसपछि अरूलाई सङ्केत लागि पुरस्कृत हुन्छ. प्रारम्भिक adopters सबैभन्दा पुरस्कार र लाभ योजना देखि भारी प्राप्त, र नयाँ लगानीकर्ताले देखि धन प्रारम्भिक adopters वितरण गर्दै. को पिरामिड को तल मानिसहरू आफ्नो लगानी मा एक हानि गर्न सम्भवत परियोजना संक्षिप्त विशेष गरी यदि हो. पहल क्यू संग कुनै प्रारम्भिक लगानी छ, तपाईं बस साइन अप. यो निःशुल्क छ र त्यहाँ सबै अनुरोध मा कुनै लगानी छ. पहल क्यू संग, त्यहाँ संलग्न कुनै प्रारम्भिक लगानी छ रूपमा सबैलाई लाभ.
यसलाई साइन अप गर्न ढिलो छ?
यसलाई साइन अप गर्न ढिलो छैन, तपाईं Google चलन ग्राफ बाट देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा. यो सिर्फ सार्न अप गर्न सुरु भएको छ, र Google चलन पनि लोकप्रियता आउँदै महिना मा जाने जारी हुनेछ भन्ने पूर्वानुमान गरेको छ. यो केवल प्रारम्भिक चरणमा छ र छ जान एक लामो बाटो छ. यस जहाँ तपाईं लगानीको बनाउन छ एक IČO छैन, यसलाई साइन अप गर्न स्वतन्त्र छ, त्यसैले त्यहाँ गुमाउन केही छ.
पहल क्यू अर्को ठूलो कुरा हुनेछ?
यो पहल क्यू बस यसलाई प्रयोगकर्ता को भारी मात्रा थुपारिरहेका को प्रारम्भिक चरण सुरू भएको छ रूपमा बताउन गाह्रो छ. हामी पछि चरणमा हेर्न जब यो छ, जब भुक्तानी प्रणाली लागू छ, यो परियोजना सफल हुनेछ यदि हामी न्याय गर्न सक्ने. यो Paypal लिङ्क साथ एक टोली छ त परियोजना बलियो देखिएन
म मात्र सीमित निमन्त्रणा छ, त्यसैले यसलाई 1st 1st आधार सेवा आउन छ.
लिंक आमन्त्रण: https://initiativeq.com/invite/SHLWWUw3X
छ पछि आमन्त्रण कोटा पुगेको लिङ्क स्वतः निष्क्रिय हुनेछ.
Tags: Airdrop Airdrops विटक्वाइन Blockchain BlockchainTechnology Cryptocurrency
← CentOS लिनक्स पुन: बुट स्वतः पुनर्स्थापना iptables कसरी स्थापित गर्न? How to configure the Windows Defender Firewall for sharing drives in Docker? →
One thought on “पहल क्यू समीक्षा – अर्को ठूलो डिजिटल मुद्रा?”